ဘယ် Gym ဆရာမှ ဖွင့်ပြောမှာမဟုတ်တဲ့ စကား (၄) ခွန်း -
ဘယ် Gym ဆရာမှ ဖွင့်ပြောမှာမဟုတ်တဲ့ စကား (၄) ခွန်း
Posted on January 3, 2019 January 3, 2019 Author Hnin Ei Oo	Comment(0)
တခြားဟာတွေသာ ပြောရင်ပြောလိမ့်မယ်.. ဒီ ၄ ခွန်းကတော့ လုံးဝပဲ!!!!
ဘယ်သူမဆိုတော့ ကိုယ်အချိန်ကုန်၊ လူပန်းပြီး အားအများကြီး စိုက်ထုတ်ထားရတဲ့ အရာတစ်ခုကို ရလဒ်ကောင်းကောင်းလေး ထွက်စေချင်ကြတာပါပဲ။ အဲဒီလို ရလဒ်ထွက်ဖို့အတွက် ထရိန်နာတွေက သင်ပြပေးဖို့ လိုပါသေးတယ်။ ဆရာမပြ နည်းမကျဆိုသလို Gym မှာ လေ့ကျင့်တဲ့အခါ ကိုယ့်ကို သင်ပြပေးမယ့် ထရိန်နာတွေ လိုအပ်ပေမဲ့ ကိုယ်လေ့ကျင့်နေတဲ့အချိန်တောက်လျှောက် ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းကို လေ့ကျင့်ပေးမယ့် Personal Trainer ငှားမယ်ဆိုရင်တော့ ထရိန်နာတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဒီစကား (၆) ခွန်းကို တွေးနေမိမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ယောင်းတို့ကို ဘယ်သောအခါမှတော့ ထုတ်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်စကား (၆) ခွန်းလဲဆိုတော့…
(၁) အမှန်တော့ ငါ့ကိုနင်မလိုအပ်ပါဘူး၊ နင့်ရဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံကိုပဲ ပြောင်းဖို့လိုအပ်နေတာပါ။
စငှားပြီဆိုတာနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့တစ်နေ့တာ စားသောက်နေထိုင်တဲ့ပုံစံ၊ ရေဘယ်နှခွက်သောက်တယ်ကအစ နောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းသွားတဲ့ အခြေအနေကိုပါ သေချာအသေးစိတ်မေးပြီး သူလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာကို ပုံစံခွက်ချစားခိုင်းတယ်မလား? အဲဒါဘာလို့လဲသိလား? ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံရဖို့ဆို အစားအသောက်က ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ အရေးပါပြီး လေ့ကျင့်ခန်းကတော့ ၄၀% လောက်ပဲ အရေးပါတာမို့ပါ။ ဒီနှစ်ခုမျှသွားရင်တော့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံကို ရပြီမို့သူတို့က လေ့ကျင့်ခန်းထက်စာရင် အစားအသောက်နဲ့ပဲပိုပြီး ထိန်းသိမ်းခိုင်းတာပါ။ ဒါဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုရင် သူ့ကိုပိုက်ဆံအများကြီး ပေးငှားစရာမလိုဘဲ ကိုယ့်ရဲ့အစားအသောက်နဲ့နေထိုင်မှုပုံစံကိုပဲ သေချာသတိထားပြီး ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သွားရုံနဲ့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံကို ရနိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ.. ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူကတော့ ဒါကို ထုတ်ပြောနေမလဲနော်..
Related Article >>> Gym ဆော့ပြီးတဲ့အချိန် ဘာလို့အစားစားသင့်တာလဲ?
(၂) မာဆယ်တက်ဖို့ဆိုတာ အရမ်းကြာတယ်။
နှစ်အကြာကြီး စွဲဆော့ရင်တော့ မာဆယ်က မဖြစ်မနေတက်လာမှာပါပဲ။ အဲဒီလို အကြာကြီးမစောင့်ချင်လို့ ဒီလိုဈေးကြီးပေးငှားပါတယ်ဆိုမှ သူနဲ့ဆက်ဆော့လည်း ကြာဦးမှာပဲဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုလုပ် စိတ်ချမ်းသာတော့မလဲနော် 😀 အဲဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုတော့ လေချိုအေးလေးနဲ့ ဘယ်အချိန်ဆိုတက်မှာ၊ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကတော့ ပုံစံချင်းမတူဘူးလေ၊ အခုတောင် နည်းနည်းလေးတက်လာသလိုပဲ စသည်ဖြင့် ပုံစံမျိုးစုံ ရွှီရှောင်လုပ်ပြီး ပြောကြရတာပေါ့… အဲဒါကြောင့် မာဆယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ သေအောင်လိုက်လုပ်လုပ် တက်ဖို့က တကယ်ကို ခက်ခဲပါတယ်ဆိုတာကိုတော့ ယောင်းတို့သိထားရမယ်နော်။
(၃) ကျွန်တော်တို့လည်း ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံရဖို့ တစ်ခါတလေ စတီးရွိုက်ထိုးရပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ဘယ်သို့ဘယ်ပုံစားသောက်၊ ဘယ်လိုတွေ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီး ထရိန်နင်ဆင်းခဲ့ရတာလို့ ဘယ်လောက်ပဲပြောပြော တချို့သောဆရာတွေက ဒီလိုကျစ်လျစ်မာကျောတဲ့ ကြွက်သားတွေရဖို့အတွက် စတီးရွိုက်ကို အနည်းနဲ့အများ သုံးစွဲရတာမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်က စတီးရွိုက်မသုံးထားတဲ့ အမှန်အကန်ကြွက်သားတွေနဲ့ ဆရာလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဘာသာနည်းနည်းရွှီရှောင် စုံစမ်းပေါ့နော်။ သူ့ပါးစပ်ကတော့ ကျွန်တော်စတီးရွိုက်ထိုးထားတယ် ဆိုတာမျိုးဘယ်တော့မှ ထုတ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးလေ။
စဉ်းစားကြည့်လေယောင်းရယ်။ သူ့ကို Gym ဖိုးထက် ၂ ဆနီးပါးလောက် ကုန်နေပြီ။ ဒါတစ်ခုတည်းတင်မဟုတ်ဘူး ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံက ခက်ရင်ခက်သလောက် ဖြည့်စွက်စာတွေလည်း ထပ်တိုးရဦးမှာမို့ တခြား အပို ယိုပေါက်တွေလည်း အများကြီးရှိနေပါဦးမယ်ဆိုတာကို မမေ့နဲ့နော်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုပိုက်ဆံတွေ ရှယ်ကုန်မယ်လို့တော့ သူကပြောမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဖြည်းဖြည်းချင်း နှဲ့နှဲ့ပြီး ဝယ်ခိုင်းမှာမို့ ကိုယ့်ဘာသာကြည့်ပေါ့အေ။ ဒီလိုဝယ်ခိုင်းဖို့ကလည်း သူ့တာဝန်မဟုတ်လား…
Related Article >>> Gym နဲ့ပတ်သက်ပြီးလူအများလက်ခံထားတဲ့အယူအဆအမှားများ
ကဲ.. ခုတော့ သူတို့မပြောလည်း ကိုယ်သိသွားပြီဟုတ်? တကယ်တော်ပြီး လုံးဝဆရာကျတဲ့ဆရာတွေလည်း အများကြီးပါပဲနော်… Gym သွားမယ်လို့ စကြံကတည်းက Personal Trainer ငှားမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ရှိနေတဲ့ ယောင်းတို့ စမ်းတဝါးဝါးနဲ့ အများကြီး ကုန်နေမယ့်အစား ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင် တစ်နေရာတည်းမှာပဲ သုံးစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ပါလို့။ ယောင်းလေးတို့အားလုံး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို အချိန်တိုအတွင်း ရနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
References : marketwatch, Readers’ Digest
တခွားဟာတှသော ပွောရငျပွောလိမျ့မယျ.. ဒီ ၅ခှနျးကတော့ လုံးဝပဲ!!!!
ဘယျသူမဆိုတော့ ကိုယျအခြိနျကုနျ၊ လူပနျးပွီး အားအမြားကွီး စိုကျထုတျထားရတဲ့ အရာတဈခုကို ရလဒျကောငျးကောငျးလေး ထှကျစခေငျြကွတာပါပဲ။ အဲဒီလို ရလဒျထှကျဖို့အတှကျ ထရိနျနာတှကေ သငျပွပေးဖို့ လိုပါသေးတယျ။ ဆရာမပွ နညျးမကဆြိုသလို Gym မှာ လကေ့ငျြ့တဲ့အခါ ကိုယျ့ကို သငျပွပေးမယျ့ ထရိနျနာတှေ လိုအပျပမေဲ့ ကိုယျလကေ့ငျြ့နတေဲ့အခြိနျတောကျလြှောကျ ကိုယျ့တဈယောကျတညျးကို လကေ့ငျြ့ပေးမယျ့ Personal Trainer ငှားမယျဆိုရငျတော့ ထရိနျနာတှရေဲ့ စိတျထဲမှာ ဒီစကား (၆) ခှနျးကို တှေးနမေိမှာ အမှနျပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ယောငျးတို့ကို ဘယျသောအခါမှတော့ ထုတျပွောမှာမဟုတျပါဘူး။ ဘယျစကား (၆) ခှနျးလဲဆိုတော့…
(၁) အမှနျတော့ ငါ့ကိုနငျမလိုအပျပါဘူး၊ နငျ့ရဲ့ နထေိုငျမှုပုံစံကိုပဲ ပွောငျးဖို့လိုအပျနတောပါ။
စငှားပွီဆိုတာနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့တဈနတေ့ာ စားသောကျနထေိုငျတဲ့ပုံစံ၊ ရဘေယျနှခှကျသောကျတယျကအစ နောကျဆုံးကိုယျ့ရဲ့ဝမျးသှားတဲ့ အခွအေနကေိုပါ သခြောအသေးစိတျမေးပွီး သူလိုခငျြတဲ့အတိုငျးအတာကို ပုံစံခှကျခစြားခိုငျးတယျမလား? အဲဒါဘာလို့လဲသိလား? ကိုယျလိုခငျြတဲ့ ခန်ဓာကိုယျပုံစံရဖို့ဆို အစားအသောကျက ၆၀ ရာခိုငျနှုနျးအထိ အရေးပါပွီး လကေ့ငျြ့ခနျးကတော့ ၄၀% လောကျပဲ အရေးပါတာမို့ပါ။ ဒီနှဈခုမြှသှားရငျတော့ ကိုယျဖွဈခငျြတဲ့ပုံစံကို ရပွီမို့သူတို့က လကေ့ငျြ့ခနျးထကျစာရငျ အစားအသောကျနဲ့ပဲပိုပွီး ထိနျးသိမျးခိုငျးတာပါ။ ဒါဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုရငျ သူ့ကိုပိုကျဆံအမြားကွီး ပေးငှားစရာမလိုဘဲ ကိုယျ့ရဲ့အစားအသောကျနဲ့နထေိုငျမှုပုံစံကိုပဲ သခြောသတိထားပွီး ဖွညျးဖွညျးမှနျမှနျ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျသှားရုံနဲ့ ကိုယျဖွဈခငျြတဲ့ပုံစံကို ရနိုငျတယျဆိုတာပါပဲ.. ဒါပမေဲ့ ဘယျသူကတော့ ဒါကို ထုတျပွောနမေလဲနျော..
Related Article >>> Gym ဆော့ပွီးတဲ့အခြိနျ ဘာလို့အစားစားသငျ့တာလဲ?
(၂) မာဆယျတကျဖို့ဆိုတာ အရမျးကွာတယျ။
နှဈအကွာကွီး စှဲဆော့ရငျတော့ မာဆယျက မဖွဈမနတေကျလာမှာပါပဲ။ အဲဒီလို အကွာကွီးမစောငျ့ခငျြလို့ ဒီလိုဈေးကွီးပေးငှားပါတယျဆိုမှ သူနဲ့ဆကျဆော့လညျး ကွာဦးမှာပဲဆိုရငျတော့ ဘယျလိုလုပျ စိတျခမျြးသာတော့မလဲနျော 😀 အဲဒါကွောငျ့ ကိုယျ့ကိုတော့ လခြေိုအေးလေးနဲ့ ဘယျအခြိနျဆိုတကျမှာ၊ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျကတော့ ပုံစံခငျြးမတူဘူးလေ၊ အခုတောငျ နညျးနညျးလေးတကျလာသလိုပဲ စသညျဖွငျ့ ပုံစံမြိုးစုံ ရှီရှောငျလုပျပွီး ပွောကွရတာပေါ့… အဲဒါကွောငျ့ မာဆယျဆိုတာ ဘယျလိုပုံစံနဲ့ သအေောငျလိုကျလုပျလုပျ တကျဖို့က တကယျကို ခကျခဲပါတယျဆိုတာကိုတော့ ယောငျးတို့သိထားရမယျနျော။
(၃) ကြှနျတျောတို့လညျး ကိုယျလိုခငျြတဲ့ပုံစံရဖို့ တဈခါတလေ စတီးရှိုကျထိုးရပါတယျ။
ကြှနျတျောကတော့ ဘယျသို့ဘယျပုံစားသောကျ၊ ဘယျလိုတှေ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပွီး ထရိနျနငျဆငျးခဲ့ရတာလို့ ဘယျလောကျပဲပွောပွော တခြို့သောဆရာတှကေ ဒီလိုကဈြလဈြမာကြောတဲ့ ကွှကျသားတှရေဖို့အတှကျ စတီးရှိုကျကို အနညျးနဲ့အမြား သုံးစှဲရတာမြိုးတှေ ရှိပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျက စတီးရှိုကျမသုံးထားတဲ့ အမှနျအကနျကွှကျသားတှနေဲ့ ဆရာလိုခငျြတယျဆိုရငျတော့ ကိုယျ့ဘာသာနညျးနညျးရှီရှောငျ စုံစမျးပေါ့နျော။ သူ့ပါးစပျကတော့ ကြှနျတျောစတီးရှိုကျထိုးထားတယျ ဆိုတာမြိုးဘယျတော့မှ ထုတျပွောမှာမဟုတျဘူးလေ။
စဉျးစားကွညျ့လယေောငျးရယျ။ သူ့ကို Gym ဖိုးထကျ ၂ ဆနီးပါးလောကျ ကုနျနပွေီ။ ဒါတဈခုတညျးတငျမဟုတျဘူး ကိုယျဖွဈခငျြတဲ့ပုံစံက ခကျရငျခကျသလောကျ ဖွညျ့စှကျစာတှလေညျး ထပျတိုးရဦးမှာမို့ တခွား အပို ယိုပေါကျတှလေညျး အမြားကွီးရှိနပေါဦးမယျဆိုတာကို မမနေဲ့နျော။ ဒါပမေဲ့ ဒီလိုပိုကျဆံတှေ ရှယျကုနျမယျလို့တော့ သူကပွောမှာမဟုတျပါဘူး။ ဖွညျးဖွညျးခငျြး နှဲ့နှဲ့ပွီး ဝယျခိုငျးမှာမို့ ကိုယျ့ဘာသာကွညျ့ပေါ့အေ။ ဒီလိုဝယျခိုငျးဖို့ကလညျး သူ့တာဝနျမဟုတျလား…
Related Article >>> Gym နဲ့ပတျသကျပွီးလူအမြားလကျခံထားတဲ့အယူအဆအမှားမြား
ကဲ.. ခုတော့ သူတို့မပွောလညျး ကိုယျသိသှားပွီဟုတျ? တကယျတျောပွီး လုံးဝဆရာကတြဲ့ဆရာတှလေညျး အမြားကွီးပါပဲနျော… Gym သှားမယျလို့ စကွံကတညျးက Personal Trainer ငှားမယျဆိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြရှိနတေဲ့ ယောငျးတို့ စမျးတဝါးဝါးနဲ့ အမြားကွီး ကုနျနမေယျ့အစား ထိထိရောကျရောကျဖွဈအောငျ တဈနရောတညျးမှာပဲ သုံးစခေငျြတဲ့ စတေနာနဲ့ပါလို့။ ယောငျးလေးတို့အားလုံး ကိုယျလိုခငျြတဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို အခြိနျတိုအတှငျး ရနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
Tagged 6, lifestyle, not, personal, spoken, trainer, words
Posted on April 26, 2019 Author Stella
ဝိတ်တော့ကျချင်ပါရဲ့… မစားဘဲလည်း မနေနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ ယောင်းတို့အတွက်…
Posted on November 9, 2018 November 9, 2018 Author Hnin Ei Oo
ဝိတ်ချနေသူ (or) ဝိတ်မတက်ချင်သူများအတွက် အဆာပြေစားစရာများ
Posted on December 13, 2017 July 7, 2019 Author Hnin Ei Oo
အဆာလဲပြေမယ် ဝိတ်လဲပိုမတက်စေဖူးဆိုတဲ့ snack လေးတွေဆိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်မလား…
အခြေအနေ၊ အချိန်အခါမရွေး ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါအကြောင်း သိကောင်းစရာ..
စကားတွေကို လှလှပပ တန်ဆာဆင်ဖို့ အရောင်တွေကို အီဒီယမ်အနေနဲ့ ခပ်လန်းလန်းလေး သုံးကြမယ်